सरकारमा जाँदैनौं, विपक्षमा बस्छौं : लक्ष्मणलाल कर्ण
मन्त्री छान्‍न पेरिसडाँडामा माओवादी स्थायी कमिटी बैठक
के 'आरएनए' नै हाम्रो जीवन कथाको नायक हो त?
वैज्ञानिकहरू भन्छन्- जीवन शुरू भएपछि पृथ्वीका हरेक ठाउँहरू कसरी भरिन गए र विविधता कसरी सम्भव भयो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। तर, अजैविक पदार्थबाट यो धर्तीमा जीवन कसरी उत्पन्न भयो? यो ज्वलन्त प्रश्न हामी सामु छ, जसको उत्तर अझै अज्ञात छ।
आफ्ना बच्चालाई किन पढाउने घरछेउका स्कूल?
आफ्ना बच्चालाई घर नजिकैको स्कूलमा पढाउने बित्तिकै हतार-हतार गाडी चढाएर स्कूल पठाउने टण्टा हुँदैन, उनीहरूले स्कूल जाँदा-आउँदा पाउने सास्ती घट्नेछ।
के हो 'ब्ल्याक फंगस' ? कसरी बच्ने?
म्युकर नामको ढुसी जिउभित्र छिरेपछि त्यसले कुनै भागको छालामुनिको मासु बिगार्दै त्यो हड्डीसम्मै पुग्छ, यसले कोषिकाहरूलाई खाँदै–खाँदै जान्छ र गहिरो घाउ बनाउँछ। त्यही घाउ कालो–कालो देखिने भएकाले यसलाई ब्ल्याक फंगस भनिएको हो।
भोकको पीडा (तस्वीरहरु) ११ चैतमा सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि सविनामा के गर्ने, के नगर्ने द्विविधा उत्पन्न भयो। सरकार काेही पनि काममा नजाउन् र घरमै बसून् भन्ने चाहन्थ्यो । तर, काममा नगई पेट पाल्ने कसरी ?